युरोको क्वाटर, सेमि र फाइनल खेल कहिले र कहाँ हुँदैछन् खेल ? हेर्नुस् तालिका सहित् — KhabarTweet
| Monday 2nd August 2021
युरोको क्वाटर, सेमि र फाइनल खेल कहिले र कहाँ हुँदैछन् खेल ? हेर्नुस् तालिका सहित्
एजेन्सी – युरोपेली च्याम्पियनसिप २०२० अन्तर्गत राउन्ड अफ १६ चरणको सबै खेल समाप्त भएसँगै क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । अब दुई दिन विश्रामपछि क्वाटरफाइनल चरणको खेल सुरु हुनेछ ।
राउन्ड अफ १६ बाट डेनमार्कले वेल्समाथि ४-० को फराकिलो जित दर्ता गर्दै क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको थियो । समूह ए को विजेता इटालीले अतिरिक्त समयमा लम्बिएको खेलमा अष्ट्रियालाई २-१ ले पराजित गर्दै अन्तिम ८ मा स्थान पक्का गर्न सफल रहयो ।
समूह चरणमा शत प्रतिशत नतिजा निकालेको नेदरल्यान्ड्स भने चेक रिपब्लिकसँग स्तब्ध हुन पुग्यो । दोस्रो हाफ १० खेलाडीमा सिमित भएको डच टोलीलाई चेकले २-० ले हराएको थियो । त्यस्तै युरोकै सर्वकालीन महान खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगल बेल्जियमसँग पराजित भयो । बेल्जियमले १-० को जित दर्ता गर्दै अन्तिम ८ मा पुगेको हो ।
स्पेनले विश्वकपको उपविजेता क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा पराजित गर्दै ९ वर्षपछि क्वाटरफाइनल यात्रा गरेको थियो । क्रोएसियाले ३-३ को बराबरी गरेपनि अतिरिक्त समयमा २ गोल खाँदै बाहिरिएको थियो । विश्वकप विजेता फ्रान्सको यात्रामा पनि स्विट्जरल्यान्डले पूर्णविराम लगाइदिएको थियो । एक समय ३-१ को अग्रता लिएको फ्रान्सले अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा टाइब्रेकरमा हार बेहोर्यो । फ्रान्सका युवा फरवार्ड किलीयन एमबाप्पेले पेनाल्टी चुकाएका थिए ।
मंगलबार भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले पहिलो पटक युरोको नकआउट चरणमा जर्मनीलाई हराउँदै क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको हो । इंग्ल्यान्डको २-० को जितमा कप्तान ह्यारी केन र रहिम स्टर्लिङले गोल गरेका थिए । राउन्ड अफ १६ को अन्तिम खेलमा युक्रेनले स्वीडेनलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक क्वाटरफाइनलमा स्थान बनायो । अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि युक्रेन २-१ को जित हासिल गर्दै अन्तिम ८ मा पुगेको हो ।
शुक्रबार २ जुलाई
स्विट्जरल्यान्ड विरुद्ध स्पेन (राति ९ः४५ बजेरसेन्ट पिटर्सवर्ग)
बेल्जियम विरुद्ध इटाली (राति १२ः४५ बजे म्युनिख)
शनिबार ३ जुलाई
चेक रिपब्लिक विरुद्ध डेनमार्क (राति ९ः४५ बजे बाकु)
युक्रेन विरुद्ध इंग्ल्यान्ड (राति १२ः४५ बजेररोम)
४ र ५ जुलाईमा विश्राम
मंगलबार ६ जुलाई
४९. स्विट्जरल्यान्ड र स्पेन विरुद्ध बेल्जियम र इटाली को विजयी (राति १२ः४५ बजे लन्डन)
५०. चेक र डेनमार्क विरुद्ध युक्रेन र इंग्ल्यान्ड को विजयी (राति १२ः४५ बजे लन्डन)
८, ९ र १० जुलाईमा विश्राम
आइतबार ११ जुलाई
खेल नम्वर ४९ र खेल नम्वर ५० को विजेता (राति १२ः४५ बजे लन्डन)
एमालेले बनायो ९ विभाग, स्कुल विभाग प्रमुखमा ओली
योगमाया प्रवेशद्वारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना
भुटानले नेपाललाई ३ लाख डोज खोप दिने
भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १४०२ पुग्यो, कुन पालिकामा कति ?
नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने
काठमाडौं, १८ साउन- नेकपा एमालेले ९ वटा विभाग बनाएको छ ।...
भोजपुरमा डाका मुद्धाका फरार प्रतिवादी ९ बर्ष पछि पक्राउ
भोजपुर- भोजपुरमा लुटपाट गरि ९ बर्षदेखि फरार भएका प्रतिबादी पक्राउ परेका...
भोजपुरका २ युवक अवैध गाँजा सहित पक्राउ
भोजपुर- भोजपुरका दुई युवक अवैध लागू औषध गाजा सहित पक्राउ परेकाछन्...
लाइसेन्सको ट्रायल चाँडै खुल्ने
सरकारले कोरोना संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बन्द रहेको सवारी चालक...
भोजपुर- भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका- १ नेपालेडाँडामा निर्मित योगमाया प्रवेश द्वारको सामाजिक...
काठमाडौँ – भुटानले कोरोनाविरुद्धको ३ लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने...
भोजपुर, १५ साउन- भोजपुरमा दोस्रो लहरको कोभिड १९ वाट संक्रमित हुनेको...
काठमाडौं, १४ साउन- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा...
काठमाडौं- एउटा प्रश्न जसको उत्तर दिन अहिले सरकारलाई पनि मुस्किल भैरहेको...
ओलम्पिक फुटबलः जापान, स्पेन र मेक्सिको क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौं- जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिक २०२० अन्तर्गत पुरुष फुटबलको समूह चरणका...